Mandra-pahoviana no maharitra ny dingan'ny volan-tantely? - Fifandraisana
Ny dingana volan-tantely dia zavatra tsara tarehy. Tsy misy toa ny fahatsapana fahasambarana rehefa vao mifankatia ianao.
Cheesy satria mety haneno, izao tontolo izao dia toa tsara tarehy kokoa rehefa ianao latsaka amina olona .
Ny lolo ao an-kibonao rehefa mahita azy ireo mankeny aminao dia matsiro fotsiny, ary ny fientanam-po tsapanao rehefa mandalo eo am-baravarana izy ireo, na dia 5 minitra fotsiny aza no lasa, dia majika.
Saingy tsy misy afaka mijanona ao amin'ny dingan-tantely mandritra ny fotoana maharitra, ary tsy maninona.
Mandeha ny fotoana, mivoatra ny zavatra ary rehefa matotra ny fifandraisana dia misy zavatra mahatalanjona mitranga.
Ny sehatra rehefa ianao mahatsapa fahatokiana lalina sy filaminana, manao drafitra ho an'ny ho avy, ary mahalala olona ao anaty, mahatalanjona ihany koa.
Fa mandra-pahoviana no maharitra ny dingan'ny volan-tantely? Ary ahoana no ahafahanao mitahiry soa aman-tsara ny tetezamita mankany amin'ny fifandraisana matotra sy matotra fa tsy avelanao hidina amorom-bato ny fifandraisanareo?
Samy efa nandre tantaran'ireto mpivady izay tsy nahavita nanao tetezamita malama avy amin'ny tadio tadiavina mankamin'ny farany ity isika rehetra. fifandraisana manolo-tena , saingy tsy midika izany fa tokony ho sarotra izany.
Andao hiroboka lalina amin'ny tontolo sarotra amin'ny dingana tantely.
Tsy misy ny fifandraisana roa
Raha tonga eto ianao mitady valiny, miahiahy momba ny fotoana hamaranana ny dingan-tantely izay iainanao amin'izao fotoana izao, dia halako ny hiteny azy, fa toy ny ankamaroan'ny zavatra amin'ny fiainana dia tsy misy valiny.
Araka ny fantatsika lalina, ny fifandraisana rehetra dia samy hafa tsy mitovy, noho izany tsy misy vanim-potoana majika aorian'izay mifarana ho azy ny dingana honeymoon.
Raha misy fifandraisana matanjaka indrindra ary mifankahita foana ianao, mety tsy handany volana maromaro intsony ny fanatanterahana ny vanim-potoanan'ny volan-tantely ary hipetrahanareo roa miaraka amin'ny fiaraha-miasa maharitra.
Ny mpivady mihaona eo am-pandehanana, ohatra, dia tsy azo ihodivirana ny hiaina fifandraisana haingana, mandany 24 ora isan'andro miaraka ary mifankahalala haingana kokoa noho ny hafa raha toa ka izy ireo, hoy izy, manao daty indray mandeha herinandro
raiki-pitia taminao aho
Raha raisina miadana kokoa anefa ny raharaha, na izany aza, na fanahy iniana na noho ny toe-javatra - toy ny a tantaram-pitiavana lavitra na satria ny iray na ny mpiray tsikombakomba dia manana antony manokana te-handray zavatra amin'ny hafainganam-pandeha - ny vanim-potoanan'ny tantely dia mety haharitra an-taonany.
Raha ny tena izy dia maharitra ny vanim-potoanan'ny tantely raha mbola mifankahalala ianareo.
Miankina amin'ny fivoaran'ny fifandraisanareo sy ny fandraisanao zavatra miadana na haingana dia mety hanambady ianao alohan'ny hiafarany.
Taloha, ity fehezan-teny ity dia nanondro ny mpivady vao, satria maro ny olona tsy nanana fotoana hahafantarana akaiky ny vady aman-janany efa akaiky talohan'ny nahatongavan'izy ireo toy ny ankehitriny.
Ny fanao amin'ny fiarahamonina tandrefana amin'izao fotoana izao dia ny fiarahan'ny mpivady mampiaraka ary, matetika kokoa, dia miara-miaina alohan'ny handraisana ny dingana manaraka, na manan-janaka izany na mamatotra ny fatotra.
Ny olona sasany, na izany aza, dia mbola manambady haingana kokoa, noho izany dia mety mbola hahalala ny zava-drehetra momba ny tsirairay izy ireo ary hifankahita amin'ny alàlan'ny haizim-pitiavana amin'ny taona voalohany nanambadiany.
Raha miara-miaina ny mpivady alohan'ny manapa-kevitra ny hanao zavatra ofisialy, na manolo-tena mandritra ny androm-piainana izany na tena manambady, dia azo antoka fa tsy haharitra ela loatra ny vanim-potoanan'ny tantely.
Rehefa miara-mipetraka amin'ny olona iray ianao dia tsy afaka manafina ny lesoka sy ny quirks ary tsy afeniny ny azy ireo. Raha mbola tia olona iray manana fahalalana feno ny tsy fahalavorariany ianao, dia eo amin'ny dingana milamina amin'ny fifandraisanareo ianao.
Fa maninona no miasa mafy toy izany ny fifandraisana?
Haingana loatra ve ny fifandraisana? Fomba 9 hampiadana ny zavatra kely
Raha te hiverina amin'ny fitiavana miaraka amin'ny mpiara-miasa maharitra ianao dia ataovy ireo zavatra ireo
7 Fanantenantena tsy azo tanterahina hialana rehefa miditra fifandraisana vaovao
Mampijaly sa mitsabo?
Raha miresaka amin'ny teny ankapobeny dia afaka mizara tsara ny olona amin'ny toby roa isika.
Ireo izay mankafy ny dingana volan-tantely, miaraka amin'ny fiakarana sy fidinana ary fientanam-po rehetra, izay mivelona amin'ireo lolo ireo, ary handany ny fiainany am-pifaliana mandritra ny volan-tantely tsy misy farany.
Ary ireo izay mahita ny dingana voalohany dia manahirana loatra ka aleony miala amin'ny fiarahana sy filaminana.
Na aiza na aiza toby latsaka ao ianao, heveriko fa hanaiky ianao fa ny tetezamita manomboka amin'ny dingana iray mankany amin'ny manaraka dia mety ho somary sarotra ihany, indrindra ho an'ireo izay mbola tsy tafita ny faran'ny volan-tantely teo aloha.
Raha sambany ianao manandrana mifampiraharaha amin'ity fanovana ity, na raha mbola tsy nahavita azy tsara ianao dia ireto misy toro-hevitra vitsivitsy hahatafita velona amin'ny faran'ny voalohany.
1. Antenao fa ho hafa ny zavatra.
Ny lakileny dia ny fahatsapana fa hiova hatrany ny raharaha. Miova sy mihalehibe ny olona ary tsy hitovy mihitsy ny fifandraisanareo amin'ny andro iray ka hatramin'ny ampitso. Miomàna amin'izany fanovana izany, mientanentanana amin'izany ary vonona handray azy.
2. Tadidio fa lalana roa-lalana.
Ny zavatra iray izay mety hialana amin'ny fifandraisana mahafinaritra taloha dia ny fanovan'ny olona ny fihetsiny manoloana ilay olona iray hafa, saingy manantena ny mpiara-miasa aminy mbola ho toy ny teo am-boalohan'ny fitiavana.
rehefa misy bandy tsy liana aminao
Mitsahatra tsy ho toy ny be fitiavana na mihaino tsara, saingy sosotra izy ireo raha manao toy izany koa ny olon-tiany.
Miezaha mba hahafantatra hatrany ny fihetsikao sy ny fomba nanovanao ny olon-tianao, ary aza manantena zavatra avy amin'izy ireo fa tsy vonona hanome anao intsony ianao.
3. Aza manandrana mifikitra.
Ny zavatra ratsy indrindra azonao atao dia ny manandrana mafy manantona ny dingana tantely. Betsaka ny zavatra mahafinaritra ho avy, koa alao antoka fa miandrandra ianao fa tsy miverina.
4. Miroborobo ao.
Betsaka ny zavatra mahafinaritra momba ny dingana manaraka amin'ny fifandraisana. Ny fampiononana, ny fahatokisana, ny fahatakarana… Alao antoka fa mandany fotoana ianao hahafantarana fa mahafinaritra tokoa ny fahatsapana fa tena akaiky olona iray ianao.
5. Ataovy velona hatrany ny majia.
Satria tsy tokony hifikitra amin'ny fiainana malala amin'ny vanim-potoanan'ny volan-tantely ianao, dia tsy midika izany hoe tokony hatsahatra ny ezaka ataonao na ajanony ny fitiavanao. Mifanohitra tanteraka amin'izany.
Hamarino tsara fa mbola mampiseho ny vadinao fotsiny ianao ohatrinona ny fitiavanao azy ireo ara-dalàna.
Io ny fihetsika kely indrindra izay manisa ary hampahafantatra azy ireo fa tena manome lanja azy ireo tokoa ianao ary te hahita ny toerana itondran'ity fitsangatsanganana anao roa ity.
6. Ataovy lohalaharana ny fifandraisanareo.
Na dia tsy tokony hifantohanao irery amin'ny fiainanao aza ny fifandraisanao dia tokony ho iray amin'ireo laharam-pahamehanao io raha tena matotra ianao amin'izany.
Ianao dia mila manokana fotoana tsara kalitao handanianao ny zavatra tianao indrindra tsy misy asa ary tsy misy fitaovana manakana .
Raha mora ny mandany ora maro mifampijery maso fotsiny amin'ny fiandohan'ny fifandraisana, dia mety hanomboka handray ny fiainana rehefa mandroso ny raharaha, ary mora ny manadino ny mandany fotoana hifaneraserana fotsiny.
inona no tadiavin'ny fahatsiarovan-tena anao aminao
Raha mila mandahatra an'io fotoana io ianao, tsy dia misy endrika toa izany, dia alao antoka fa hitranga tsy tapaka.
Mbola tsy azonao antoka ve ny fomba hivoahana amin'ny dingana honeymoon? Miresaka an-tserasera amin'ny manam-pahaizana momba ny fifandraisana avy amin'ny Relationship Hero izay afaka manampy anao hahalala zavatra. Tsotra.
mampiaraka amina lehilahy manambady ary manan-janaka
ahoana no itokisanao ny olona mandainga
ny fomba tsy ho sahirana sy misisika be
ahoana ny fomba ilazana olona fa sandoka